အင်္ဂလိပ်စာ ရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း-၁ (Cover Letter) - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်စာ ရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း-၁ (Cover Letter)
Posted by AungKoU (UMK) on December 29, 2012 at 14:49 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယနေ့ခေတ် အချိန်တွင် ပြောင်းလဲ တိုးတက်နေသော ကမ္ဘာကြီးနှင့် အမီ လူငယ်များသည် နိုင်ငံတကာ နှင့် ရင်ဘောင်တန်းကာ လုပ်ငန်းခွင် အသီးသီးတွင် လုပ်ကိုင် နေကြသလို လုပ်ကိုင်ရန် ကြိုးစား နေကြသူများလည်း ရှိကြပါသည်။ အလုပ်နေရာတစ်ခုကို လျှောက်ထားရာတွင် Cover Letter သည် အရေးကြီးသော ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မိမိ၏ Cover Letter အပေါ်တွင် မူတည်၍ လုပ်ငန်းရှင်၏ ယုံကြည်အားထားမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ပါ၍ လူငယ်များ အလုပ် လျှောက်ထားရာတွင် အရေးပါသည့် Cover Letter ရေးသားခြင်း ပုံစံကို ဝေမျှလိုက်ပါသည်။
Tel 0207 337 34789
Mrs. F Hunter
Cambridge CB7 9HD
Dear Mrs. Hunter
I am writing to apply for the post of senior accounts clerk advertised in the Cambridge Evening News of 17 January.
I am committed to pursuingacareer in management accounting and am currently studying for further professional qualifications by distance learning. I am particularly interested in your post as it would enable me to gain experience of working inalarger development that this brings. In addition to my skills and experience as an accounts clerk, I would bring to the postaproven ability to deal successfully and tactfully with customers and clients.
I am available for interview for the next three weeks.
မိမိ၏နာမည်နှင့် လိပ်စာကို စာ၏ ညာဘက် ထိပ်ထောင့်တွင်ရေးသားပါ။ ရက်စွဲကို ဖော်ပြထားသော ပုံစံအပြင် January 20 2012, 20/1/12 (BrE), 1/2/12 (NAmE) ပုံစံများဖြင့်လည်း ရေးသားနိုင်ပါသည်။ မိမိ၏ စာကို တင်ပြမည့်သူ၏ အမည်နှင့် လိပ်စာကို ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ ဆက်လက်ရေးသားပါ။ အကယ်၍ အမည် မသိရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ၏ ရာထူး၊ နေရာ (ဥပမာ - Human Resources Manager) စသည်ဖြင့် အစဉ်တိုင်းရေးသားပါ။ လျှောက်ထားမည့် ရာထူး၊ နေရာ ကို အလုပ်ကြေငြာစာတွင် ဖော်ပြသည့်အတိုင်း တိတိကျကျ ဖော်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။ လျှောက်လွှာရေးသားရာတွင် I'm ဟု ရေးသားခြင်းကို ရှောင်ကြည်ရမည်ဖြစ်ပြီး I am ဟုသာ ရေးသား ရပါမည်။ စာတွင် တင်ပြသူကို အမည်နှင့်ကို ဖော်ပြရေးသားထားလျှင် Your sincerely ဟုရေးသားနိုင်ပြီး အမည် မဖော်ပြဘဲ Dear Sir/ Madam ဟုရေးသားပါက Your faithfully ဟု ရေးသား ရပါမည်။ ထပ်တွဲ တင်ပြလိုသော စာရွက် စာတမ်းများကို Enc. သို့မဟုတ် encl. ဟုရေးသားပြီး ပါရှိမည့် စာရွက်စာတမ်းများ၏ အမည်များကို ရေးသား ဖော်ပြရပါမည်။
ပထမစာပိုဒ်တွင် စာ၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြပေးရပါမည်။ မည်သည့် နေရာ၊ ရာထူးကို လျှောက်ထားလိုသည် မည်သည့်နေရာ မှ မည်သို့ သတင်းအချက်အလက် ရရှိသည် (ဥပမာ- တီဗွီ၊ သတင်းစာ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာ အစရှိသဖြင့်) ရေးသားရပါမည်။
ဒုတိယစာပိုဒ်တွင် လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင် နေပါက လုပ်ရှိအလုပ်၏ ရာထူး၊ နေရာ နှင့် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သော တာဝန်၊ ဝတ္တရားများကို ဖော်ပြပေးရမည်။ လက်ရှိလျှောက်ထားသော ရာထူး၊ နေရာနှင့် ဆက်စပ် ပက်သက်ကြောင်းဖော်ပြနိုင်ရပါမည်။ လက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ မဟုတ်ပါက နောက်ဆုံး လုပ်ခဲ့သော အလုပ် အကြောင်းကို အထက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပေးရပါမည်။
တတိယစာပိုဒ်တွင် မည်သည့် အတွက်ကြောင့် ဤ ရာထူးကို လျှောက်ထားလိုသည်၊ ၎င်းအတွက် မိမိက မည်သို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည်ကို ဖော်ပြပေးရပါမည်။ လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းနေရာ အတွက် မိမိက မည်မျှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်ကို ဖော်ပြရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
စတုတ္ထစာပိုဒ်တွင် အခြားဆက်စပ်သော အချက်အလက်များနှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် အင်တာဗျူး ဝင်ရောက်နိုင်သည်ကို ဖော်ပြပေးရပါမည်။
စာရေးသားရာတွင် အောက်ပါ စာသားများကို လိုအပ်သလို အစားထိုး သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Since graduation form ……, I have………
I have considerable/ extensive experience in (the field of ……)
I consider/ feel that my qualifications and work experience could/ might be of interest to the company.
If called for (an) interview, I would be available at any time convenient for you.
Please find attachedacopy of my curriculum vitae/ resume for your consideration.
အလုပ်လျှောက်ထားကြမည့် လူငယ်များ လိုအပ် သလိုအသုံးပြုကာ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နိုင်ကြပါစေ….
U Mya Kyaing English Language School
Face book: http://www.facebook.com/aungkou
ရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း (၁).pdf, 124 KB
Permalink Reply by 2xfe8d4odf1y4 on December 31, 2012 at 0:15
Permalink Reply by Bryań Santiaĝo Horan on December 2, 2015 at 22:17
Many thanks! It helps me :-)
Permalink Reply by htaylim on December 3, 2015 at 19:11